Daangaa Oromiyaafi Somaalee irratti ammalleen lubbuun darbaa jira - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Obbo Biduu Dhaddachaa, walitti bu'iinsa aanaa Areerootti uummameen miidhamanii hospitaala Yaaballootti wal'aansi taasifamaafii jira
"Maatiin keenya horsiise bulaadha. Muuxannoo waraanaa hin qaban. Gama tokko bonaan gama biraan ammoo waraanaan miidhamaa jiru," jedha Diidaa Gaayoo, barataa hospitaala Yaaballoo keessatti osoo tola ooltummaan namoota waraanaan miidhamaniif deeggarsa taasisaa jiruu dubbisne.
Wal waraansi naannoolee Oromiyaafi Somaalee gidduu amma kallattii addaa kan qabate, ulfaatinni isaas kan cime fakkaata.
Godinaalee Oromiyaa naannoo Somaalee daangeessan keessaa Boorana, Baaleefi Gujiitti walitti bu'iinsi bifa haaraan eegaleera.
Jimaata darbe Godina Booranaa aanaa Areeroo araddaa Horotoofi Malkaa Halluutti lola humni addaa naannoo Somaalee baneen lubbuun lammiilee 13 kan darbe yoo ta'u, namoonni 23 ammoo madaa'usaanii, Obbo Addisuu Aragaa Ittigaafatamaan Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa feesbuukii isaaniirratti barreessaniiru.
Magaalaan Mooyyalee wal aggaammii dhakaatii hanga dhukaasa meeshaa waraanaatti kan keessummeessitu sochiin diinagdee taasifamu qorreera.
Jiraatoonni magaalaa Mooyyalee BBC'n dubbisees, butuun yookiin dirqiin ukkaamsanii fudhachuun tibbana baay'achaa dhufuusaa himan.
Haalli nageenyaa magaalattii yaaddessaa ta'u kan himan jiraataan magaalaa Mooyyalee obbo Alii Qaallichaa "maatiin magaalattii keessatti ijoollee guddisuun akka itti ulfaate, hojjetootni waajjiraalee mootummaallee bahanii galuun yaaddoofi sodaa itti ta'eera" jechuun BBC' ti himan.
Goodayyaa suuraa ''Moyyaleetti ijoollee guddisuun nutti ulfaachaa jira''
Aanichatti walitti bu'iinsa bifa haaraan jalqaba bara 2010 eegalee hanga ammaatti itti fufeen gandoota 9 irraa namoonni 54,000 ol qe'eefi qabeenya isaaniirraa buqqa'aniiru.
Aanaa Mooyyalee ganda Caamuqirraa kan buqqa'anii fi ijoollee isaanii sadii sababa walitti bu'iinsaatiin dhabuusaan kan dubbatan Aadde Ruufaa Diidoo, ''lafa waggoota soddomaaf irra jiraannee irraa nu buqqisan,'' jedhaniiru. Akkasumas, bara boqonnaa fi soramaa koottiin harka qullaa hafees jedhaniiru.
"Gonkumaa nagahaan jiraannee hin beeknu. Diinni yeroo mara nu haadha. Amma garuu aduufi qorri muka jalatti akkasumas beelli waliin ta'uun jireenyi keenya gadadoon itti hammaattee" jechuun nutti himan.
Aanichatti gogiinsi bara darbe mudate namoonni 50,000 ta'an deeggarsa nyaataa hattattamaa akka barbaadan taasiseera.
Kana jechuunis uummata aanichaa 208,000 ta'u keessaa namoonni 104,000 yookin uummata waliigalaa keessaa %50 kan ta'u lubbuun jiraachuuf harka mootummaafi arjoomtotaa eeggataa jiru.
Goodayyaa suuraa ''lafa waggoota soddomaaf irra jiraannee irraa nu buqqisan,'
Humnootiin poolisii naannoolee daangaa irraa akka fagaataniifi iddoowwan walitti bu'iinsi itti jiru to'annoo raayyaa ittisa biyyaafi poolisii federaalaa jala akka turaniifi nageenyi iddoowwan kunneenii akka mirkanaa'uuf Muumichi Ministiraa Haayilamaaraam Dassaalany dhiyeenya kana beeksisanis, aanaaleen Oromiyaa naannoo daangaa jiran baay'een guyyoota darbanitti wal waraansa keessummeessaa turan.
Ammalleen walitti bu'iinsi daangaa naannoolee lamaaniitti mudachaa jiru, jiraattota aanaaleefi magaaloota naannoo daangaa irratti miidhaan qaqqabsiisaa jiru olaanaadha.
Guyyaa Dilbataa magaalaa Yaaballoo keessatti hiriira kan bahan barattoonniifi kutaaleen hawaasaa biroo walitti bu'iinsichi maatiisaanii dabalatee jireenya isaanii irratti rakkoo hammaataa geessisuusaa dubbatan.
Hoji gaggeessaa hospitaala Yaaballoo kan ta'an Obbo Moluu Diimaa baay'inni madoolii sababa wal waraansaa kanaan gara hospitaalichaa dhufan guddachuusaan tajaajila fayyaa haadhooliifi daa'imman akkasumas kutaalee hawaasaa biroof kennamu miidhuusaafi oggeeyyiin fayyaallee hojicha akka nuffan taasisaa jiraachuusaa BBC'ti dubbatan.
Bakka bu'aa bulchaan aanaa Mooyyalee Obbo Hassan Mallicha, walitti bu'iinsi aanicha keessatti uumamu diinagdee aanaa Mooyyalee miidhee, nyaata dabalatee omishaaleen bu'uuraa biroo haala gahaa ta'een gara aanichatti seenaa waan hin jirreef, qaala'iinsi jireenyaa uummata aanichaaf qormaata ta'uusaa himan.
Goodayyaa suuraa Naannawa daangaa Somaalee fi Oromiyaarraa uummanni kuma dhibbaan lakka'aman buqqa'aniiru
Sababa walitti bu'iinsa kanaan qaala'insi jireenyaa naannolee kunneeniitti mul'achuusaa Ministirri Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Federaalaa Dooktar Nagarii Leencoo ibsa kaleessa gaazexeessitootaaf kennaniin mirkaneessaniiru.
Kana malees, buqqaatonni godinaalee Booranaafi Harargee Bahaarraa BBC'n haasofsiise hanqina nyaataaf saaxilamanii akka jiran dubbataniiru.
Walitti bu'iinsa dhiheenya kanaatiin naannoo daangaa naannoolee lamaatti umameen, lubbuun namoota 27 darbuu, hedduun miidhamusaanii ragaa qabaachu isaanii kan dubbatan Dr Nagarii Leencoo, Ministirri Komunikeeshinii mootummaa Federaalaa, ammas dhimmichaaf fala dhahuuf motummaan isaanii ciminaan hojjachaa jiraachuu BBC'tti himaniiru.
Haa ta'u malee, dhimma walitti bu'iinsaa kan ilaalchisuunis gama Naannoo Somaaleetii yaadasaanii argachuuf yaaliin yeroo garaa garaa taasifne osoo nuuf hin milkaa'iin hafeera. Yoomiyyuu yoo fedhii qabaatan yaada isaanii keessummeessuuf qophaa'oodha.